Dagaallo Culus oo Maanta ka Socda Deegaanno ku dhow Degmada Marko |
Dagaallo Culus oo Maanta ka Socda Deegaanno ku dhow Degmada Marko
Ugu yaraan sideed qof ayaa ku dhintay dagaallo culus oo maanta ka dhacay deegaanno ku dhow degmada Marko ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose, iyadoo ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan.
Guddoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellada Hoose ee arrimaha siyaasadda, C/llaahi Muuse Abuukar oo la hadlayay VOA-da ayaa sheegay in dagaalkan uu ka dhacay toddoba deegaan oo ku dhow degmada Marka kuwaasoo ay ka mid yihiin: Sagaarley iyo Busley, isagoo intaas ku daray in dagaalkan ay waddo wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya.
“Dagaalladan intooda badan waxaa wadda wasaaradda gaashaandhigga Somalia, waxaana taas ku xaqiijinaynaa inay dagaalka ka qaybqaadanayaan gaadiidka dagaalka ee dowladda, in la weydiiyo iyaga ayaana wanaagsan sababta ay shacabka u laynayaan,” ayuu C/llaahi Muuse ku yiri wareysiga uu siiyay VOA-da.
Sidoo kale, guddoomiye ku xigeenka ayaa xusay in dagaalka maanta ay shacab fara badan oo horay uga soo barakacay degmada Qoryooley iyo deegaannada ku dhow-dhow.
Mar uu ka hadlayay dagaalkan ayuu sheegay inay ku dhinteen inta ay ogyihiin siddeed qof, ayna tirada dhimashadu intaas kasii badan karto, maadaama ay uu weli socdo dagaalka, tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen.
“Dagaalka waxaa ku geeriyooday siddeed qof oo dhinacyadii dagaalamay ka mid ah, waxaana ku dhaawacmay tiro intaas ka badan, welina dagaalku wuu socdaa,” ayuu guddoomiye ku xigeenku hadalkiisa ku daray.
Wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaan weli ka hadlin eedeynta uu u soo jeediyay guddoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasadda ee gobolka Shabeellada Hoose oo ah inay dagaalkan iyadu lug ku leedahay.
Dagaalkan ayaa socda dagaallo maalmo ka hor ka dhacay degmada Shalaan-bood ee gobolka Shabeellada Hoose, kuwaasoo sababay dhimashada dad ka badan lix qof iyo dhaawaca tobaneeyo kale.